မတ် 2020 » Page3of 10 » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
မတ် ၂၃၊ ၂၀၂၀ ဇွန် ၁၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် အထောက်အကူပြု ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်းပြုလုပ်၊ ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် အထောက်အကူပြု ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်းပြုလုပ်၊ ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး နေပြည်တော်၊ မတ် ၂၃
Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် အထောက်အကူပြု ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများလှူဒါန်းခြင်းပြုလုပ်၊ ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုများအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကြည့်ရှုစစ်ဆေး နေပြည်တော်၊ မတ် ၂၃ Coronavirus Disease 2019(Covid-19) ရောဂါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိကာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ၂၀၂၀
Nay Pyi Taw March 18 Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing received Malaysian Ambassador to Myanmar H.E. Mr. Zahairi Baharim at
(၄၆)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ့တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ပေးပို့သည့်သဝဏ်လွှာ ချစ်ခင်လေးစားရပါသော မွန်ပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ-ယနေ့ကျရောက်သည့် (၄၆)နှစ်မြောက် မွန်ပြည်နယ်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၆၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Zahairi Baharim ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA တို့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ နေပြည်တော်၊ မတ် ၁၈